Institutelọ Akwụkwọ Mmụta Asụsụ abụọ (BEI) anọwo na-ejere ụmụ akwụkwọ gbara ọsọ ndụ na ndị kwabata mba ọzọ ihe karịrị afọ iri atọ na atọ. N'ime afọ iri atọ gara aga, BEI enyerela ọtụtụ puku ndị bịara ọhụrụ akwụkwọ ndụ, ndị gbara ọsọ ndụ asylees, ndị ọkwọ ụgbọ ala metụtara, na ndị ọbịa si mba ọzọ na-anọchite anya ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe, agụmakwụkwọ, agbụrụ na akụ na ụba. BEI nyere ụmụ akwụkwọ anyị nkuzi dị mma, na-akpali ha imezu na agụmakwụkwọ, azụmahịa, na mpaghara ụwa na mpaghara. Mmezu nke akụkụ ndị a na-enyere ụmụ akwụkwọ anyị aka na mmụta asụsụ ma mee ka ha nwee ike igosipụta ọganihu na ikike asụsụ ha. BeI nwere ahụmịhe n’ịkụzi asụsụ bekee n’ike dị iche iche: Asụsụ Nhazi Asụsụ, ESL, Mmemme Bekee siri ike, Njikere Job, na ESL n’ebe ọrụ gụnyere ma ejedebeghị na nchekwa na ọrụ metụtara ikwu okwu na okwu. Classeslọ ọrụ ndị metụtara ọrụ anyị arụ ọrụla na ọtụtụ ụdị ọrụ dị iche iche: ọrụ nri, ụlọ nri, na ụlọ oriri na nkwari akụ, n'ichepụta ihe, yana ikpo oku na ikpo ọkụ. BEI bụ akụkụ nke ndị ọrụ enyemaka nke ndị gbara ọsọ ndụ Houston na-arụ ọrụ na mmekorita afọ 33 gara aga. Njikọ aka nke ụlọ ọrụ na-ekerịta ego Steeti dị ka RSS, TAG, na TAD iji nyere ndị ọrụ gbara ọsọ ndụ na Houston aka ịrụ ọrụ nke ọma na ọrụ zuru oke. N'ime afọ 15 gara aga, BEI abụwo onye nkwekọrịta bụ isi maka Mmemme Ọrụ Ọrụ Mmụta RSS niile ma nwee ahụmịhe bara ụba na ọzụzụ, na-eleba anya na nlebara anya na usoro mmemme iji hụ na nsonaazụ na-aga nke mmemme mmekọrịta.
Na 1988, BEI bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ ole na ole nọ na Texas nyere ikike site na US Immigration and Naturalization Service iji kụziere Bekee na Civic ndị ọbịa kwabatara ọhụrụ nke natara mgbaghara na mpaghara Houston. Na 1991, BEI ghọrọ onye na-ahụ maka ọrụ na Houston Community College System na-enye ESL (ọkwa 1, 2 & 3) nke National Literacy Act (NLA) nke 1991, PL 102-73 kwụrụ ụgwọ. Na 1992, BEI nyere onyinye enyemaka site na Mgbasa Ozi Gọvanọ megide Diskpa ókè Ọrụ, nke BEI nwetara nkwado dị ukwuu site n'aka Gọvanọ maka ọrụ enyere. Site na 1995 rue 1997, BEI nyere ụmụ akwụkwọ, ọtụtụ n’ime ha bụ ndị gbara ọsọ ndụ, Ọzụzụ Nchịkwa ilinglọ Ọrụ Bilingual. Ihe omume a bụ JTPA Title II-A, II-C / Houston na-akwado mmemme ahụ. Na 1996, BEI nwetara onyinye maka Texas Citizenship Initiative (Citizenship Outreach) site na TDHS, Office of Immigration and Refugee Affairs. BEI anọwo na-egbo mkpa agụmakwụkwọ nke ndị gbara ọsọ ndụ na Harris County kemgbe 1991, site na RSS, TAG, na TAD nyere site na TDHS, nke a maara taa dị ka HHSC.
Nkwupụta / Ajụjụ